सडक, सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध निर्माणका योजना बजेटका प्राथमिकतामा परेका हुन् । जिल्लामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगत ८२ योजना छनोट भएका छन्, जसका लागि रू. ८७ करोड ९१ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका २८ ओटा योजना परेका छन् । यसका लागि रू. ९ करोड ९० लाख छुट्ट्याइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २७ योजनाको बजेट रू. ७ करोड ९१ लाख ७० हजार छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ४३ योजना समावेश गरिएकोमा रू. ६ करोड ८० लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
समग्र जिल्लाको विकासका ठूलो बजेट छुट्ट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘टुक्रे योजनाभन्दा पनि विकासका ठूलो योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने ।